AORIAN’NY COVID-19 : Mitaky fepetra goavana ny fanarenana ny toekarena
Nitohy omaly ny atrikasa karakarain’ ny HCDDED, ka anisan’ny nitondra vela-kevitra tamin’ izany ny zokiolona izay mpikambana ao amin’ ny Filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalàna na ny Haut Conseil Pour la Défense de la Démocratie et de L’Etat de Droit (Hcdded), Anaclet Imbiki. 28 octobre 2020
Nandritra ny tafa nifanaovan’ ity farany tamin’ ny mpanao gazety no nilazany fa mifameno ny ady amin’ ny kolikoly sy ny fanarenana ny toekarena. Isan’ireo Firenena tsy afa-bela amin’ny fandalovan’ny valanaretina Covid-19 i Madagasikara. Lasibatra manoloana ireo fepetra tsy maintsy arahina mba hisorohana ny fihanahan’ity valanaretina ity ny toekarena. Mitady ny fomba rehetra hanarenana haingana izay lafiny ara-toekarena izay ny Mpitondra.
An-kilany, manampy amin’ny fanoloran-kevitra ihany koa ireo manam-pahaizana sy rafitra isan-tokony. Nambaran’ny mpikambana eo anivon’ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tan-dalàna na HCDDED fa mitady fepetra fiovana ny fanaingana indray ny toekaren’ny Firenena aorian’ny fivoahana tanteraka amin’ity valanaretina ity. “Heverina fa efa tokony hifarana ny valanaretina Coronavirus. Tena nitondra ny mafy mihitsy ny toekarena malagasy vokatr’ izay, tsy misokatra ny hotely, tsy mandeha ny fiaramanidina, ny olona mihiboka. Tsy maintsy mitady ny fomba rehetra mba hanarenana indray ny ekônomia isika. Mitaky fampiharana fepetra faran’ izay henjana anefa izany mba hihatrehana ny fampandehanana ny toekarena”, hoy ny voalazany.
Nohamafisiny ihany fa raha tiana handroso ny toekarem-pirenena dia anisany ady ilofosana ny fanafoanana ny kolikoly. Ny kolikoly izay mifampiankina amin’ny lafiny Fitsarana. « Na inona na inona ady atao hampandehanana ny toekarena dia miankina be dia be amin’ ny fahatsaran’ ny Fitsarana ny fahombiazantsika amin’ izany. Satria aza hadinoina fa isan’ ny mahatonga ny toekarentsika marefo io kolikoly io », araka ny fanazavana nomeny hatrany.